AudioMob: Xalqad Iibinta Sanadka Cusub Iyadoo Lagu Xayeysiinayo Audio | Martech Zone
AudioMob: Ka Dhex Gelinta Iibka Sannadka Cusub Iyada Oo Lagu Xayeysiinayo Audio
Arbacada, December 30, 2020 Talaado, Disembar 29, 2020 Christian Facey
Xayeysiisyada maqalka ah waxay bixiyaan qaab wax ku ool ah, heer sare ah oo la bartilmaameedsaday, oo sumad u leh hab aamin ah oo loogu talagalay noocyada inay ka gooyaan buuqa oo ay sare u qaadaan iibkooda Sannadka Cusub. Kordhinta xayeysiinta maqalka ayaa ah mid ku cusub warshadaha ka baxsan raadiyaha laakiin waxay durba abuureysaa guux weyn. Buuqda dhexdooda, xayeysiisyada maqalka ah ee cayaaraha moobiilka ayaa xardhanaya barnaamijkooda; carqaladeeya warshadaha oo si dhakhso leh u koraya, magacyadu waxay arkayaan heer sare oo meelaynta xayeysiinta ah ee ciyaaraha moobiilka. Dadkuna waxay si isa soo taraysa ugu jeesanayaan ciyaaraha mobilada, iyagoo raadinaya habab cusub oo lagu buuxiyo caajiska.
AudioMob waa hormoodka qaabkan cusub: Google ee bilowga ah oo taageeray hordhaca xayeysiiska maqalka ee ciyaaraha moobiilka. Qaabkooda xayeysiinta ayaa gabi ahaanba sumcad leh oo quus ah, oo leh suurtagalnimada in magacyadu ay noqdaan kuwo geesinimo leh oo hal-abuur leh si loo gaaro dhagaystayaal tiro badan.
Muuqaalka xayeysiinta ayaa ka mashquulsan sidii hore abid xilligan oo kale, oo dukaamo badan oo jireed loo xiray xirnaanshaha goobta dagaalka ee internetka ayaa ka tartami doona sidii hore. Sidaa darteed, noocyadu waxay u baahan yihiin inay si xariifnimo leh u xayeysiiyaan xayeysiintooda sanadkaan si ay u helaan gees ayna u gaaraan natiijooyinka ay rabaan; xayeysiis maqal ah ayaa bixiya gaariga ugu fiican ee tan lagu qaban karo.
Macaamiisha Waxay Dalbanayaan Khibrad Xayeysiis Wanaagsan
2020 waxay ahayd sanad aan la mid ahayn, oo waqti badan lagu qaatay guriga, xayeysiinta caadiga ah ayaa ka weyn goobaha warbaahinta. Qufulka ayaa quful ku keenay adduunyada, iyadoo shaqada guriga laga wado, wax laga cuno guriga oo laga ciyaaro guriga hadda waxaa loo arkaa mid cusub.
Dukaameysiga Sannadka Cusub ee sanadkaan wuxuu umuuqandoonaa wax kaduwan: khadadka albaabka kabaxsan iyo isku shaandheynta iibkii ugu dambeeyay dhamaantood waxay noqon doonaan kuwa la taaban karo. Iyada oo dukaamo badan oo jireed ay u xiran yihiin dadweynaha, iibka waxaa lagu qaadayaa khadka tooska ah, tafaariiqlayaashuna waxaa laga yaabaa inay ka digtoonaadaan xilli qalalan. Celceliska celceliska kirismaska ​​ku qarash garee 2020 waxaa la filayaa inuu hoos u dhaco 7% marka loo eego sanadkii hore, by a 1.5billion weyn, ololayaasha xayeysiinta waxay u baahan yihiin inay eegaan kor u qaadista ciyaartooda si ay macaamiisha u qarashgareeyaan.
Madadaalada waa aasaaska nolosha qufulka, iyadoo TV-ga, filimka, boodhadhka iyo ciyaaraha mobilada dhamaantood ay si uun u marayaan si loo yareeyo farqiga u dhexeeya kala fogaanshaha bulshada iyo isku xirnaanta dalwaddii. Arrinta magacyadu waa muujinta xad-dhaafka ah iyada oo loo marayo qaababka caadiga ah: macaamiisha ayaa laga tagay iyaga oo doonaya wax ka duwan halka ay indhahoodu ka muuqanayaan xayeysiis muuqaal ah oo soo noqnoqda. Sannadkan Cusub waa xilligii saxda ahaa ee ay magacyadu dhegta u dhigi lahaayeen dhulka, ayna soo qaadan lahaayeen isbeddello cusub si ay uga hor maraan tartamayaasha.
Ciyaartu Waa Furaha
Kheyraadka aan laga faa'iideysan ee xayeysiiyayaasha, ciyaaraha moobiillada oo keliya ayaa soo saaray 48% wadarta dakhliga ciyaaraha adduunka oo dhan sannadkan, iyadoo a weyn $ 77 bilyan. Ciyaaraha mobilada ayaa sifiican ugu dhex milmay madadaalada qufulka, mana ahan kaliya dhalinyarada dhallinta yar ee khayaaliga ah. Tirada dadka ciyaaraha ayaa isbeddelay sannadihii la soo dhaafay, suuqooda bartilmaameedkuna si kadis ah ayuu u ballaaran yahay.
Maanta, 63% cayaartoyda moobiilku waa haween da 'celcelis ahaan da' dumar ah, 36 jir ah.
MediaKix, Tirakoobka Gamer-ka Dheddigga
Ciyaaraha moobiilka waxay bixiyaan fursad weyn oo loogu talagalay gaarista astaanta iyadoo si cad diirada loo saarayo tirakoobka dadka. Barxadku wuxuu ka faa'iideysan karaa dhagaystayaasha aan la furin oo wuxuu si toos ah ugu xiri karaa noocyada macaamiisha. Si fudud marka loo eego, ciyaaraha moobiilku waxay ku xidhi karaan astaan ​​leh dhagaystayaal in ka badan 2.5 bilyan oo ciyaartoy adduunka oo dhan ah: astaanta ugu weyn ee suurtogalka ah ee gaadhaysa dhammaan warshadaha madadaalada. Si looga faa'iideysto iibka sannadka cusub ee caanka ah, magacyadu waxay u baahan yihiin inay dhageystaan ​​dalabaadka macaamiishooda, iyo suuqa: waxay noqoneysaa mid aan caqli-gal ahayn in loo soo jeesto feejignaanta ciyaaraha moobiilka oo ah dakhli badan oo soo gala.
Codka - Xuduuda Cusub
Xayeysiinta maqalka ma ahan idaacadda xaddidan ee baahinta megoonka tobannaan sano ka hor. Waxay noqon karaan kuwo xarrago leh, siman, oo abuuri kara waayo-aragnimo ka tarjumeysa xiriirka aadanaha ee dhabta ah.
Iyada oo kuhadalka kuwa kuhadlaya codka caqliga leh kulan joogto ah guryo badan oo Maraykanka ah, xayeysiisyada maqalka dhijitaalka ah ayaa aad ugu badan. Sidoo kale sifiican ayaa loo qaabilaa:
Iyadoo 58% macaamiisha ay helayaan xayeysiis maqal ah oo caqli badan oo ka yar qaababka kale, halka 52% ay sheegeen inay sidoo kale aad u mashquulsan yihiin!
Qiimaha-ku-oolnimada xayeysiisyada maqalka waa kan labaad midkoodna, oo leh 53% macaamiisha isagoo wax ku iibsaday iyada oo ku saleysan xayeysiiska maqalka ah.
Ciyaaraha mobilada, xayeysiisyada maqalka ah waxaa loo qaadi karaa talaabo dheeraad ah si loo dareemo sida dhabta ah: waxaa gabi ahaanba lagu dhex milmi karaa qaab dhismeedka hal abuurka, iyadoo siineysa noocyo cusub oo xamaasad leh xayeysiintooda.
Xitaa waa suurtagal in la dhiso ciyaarta hareeraha xayeysiinta codka ee gabi ahaanba isku dhafan, iyada oo lagu darayo khibrada oo dhan ee loogu talagalay gamer: sida raadiyaha la dhisay ee dhowaan la bilaabay Big Brother: The Game, kaas oo adeegsaday qaabka xayeysiiska AudioMob si loogu bixiyo xayeysiis maqal ah inta lagu jiro ciyaarta.
Horumarinta DSP guuleysatay ayaa dhigtay AudioMob dusha sare ee xayeysiiska maqalka ee ciyaaraha, noqoshada qaabka ay u doorbidaan horumariyayaashu. Bararka dabiiciga ah ee dhaqdhaqaaqa ku wajahan xayeysiinta ciyaarta ee aan dhexgalka ahayn, wuxuu hormariyaa codka hore iyo bartamaha.
Xayeysiisyada maqalka ah ayaa u suurta geliya ciyaartoydu inay sii wataan ciyaarista inta lagu soo bandhigayo xayaysiiska kuma mashquulina inay ka baxaan ciyaarta laakiin wali waxay ku hawlan yihiin astaanta. Macaamiisha, waa guul maadaama ay sii wadi karaan ciyaarta; noocyada, weli way sii kordhayaan oo si isa soo taraysa ayaa loo gaadhsiinayaa; iyo horumariyayaashu waxay hubin karaan khibrad isticmaale aan kala go 'lahayn iyo quusin.
Waa guul guuleysasho iyo fursad aad kaga soo dhex muuqan karto dadka xilliyada ay noocyo badan u dagaallamayaan marxaladda dhexe.
Xayeysiisyada maqalka ah waxay ku socdaan dhabagal sare, iyadoo la saadaalinayo koritaanka 84% ee dakhliga laga bilaabo 2019 ilaa 2025, AudioMob-na waxay siineysaa xalal nadiif ah oo xarrago leh sumadaha si ay suuqa uga soo baxaan. Iyada oo dukaamo badan oo jireed la xiray oo ololihii sanadka cusub ay noqdeen kuwo hal abuur leh, goobta lagu dagaalamayo calaamadaha ayaa ku badan baahida loo qabo in laga sare maro tartamayaasha.
AudioMob waxay xiraysaa laba fursadood oo waaweyn oo loogu talagalay noocyada inay kala gooyaan buuqa warshadaha: Ciyaaraha moobiilku waa jawi dabiici ah oo kobcaya oo loogu talagalay meeleynta xayeysiinta iyadoo dhagaystayaal badani ay gaarayaan halka xayeysiisyada maqalka ah ay ka kexeynayaan qibrad u leh ciyaaryahanka iyo khibrad la'aan
Xayeysiinta maqalka ah waxay sare u qaadi kartaa soo-gaadhista sannadka cusub maylal ka badan kuwa kale sannadka 2020, AudioMob-na wuxuu ku wadaa wershadaha inay soo saaraan xayeysiis maqal ah oo ka sii wanaagsan, ka xiise badan, oo aad u xiiso badan.
Booqo AudioMob Wixii Macluumaad Dheeraad ah
Tags: xayeysiis maqal ahxayaysiinta codkamaqal dspaudiomobDSPxayaysiinta ciyaartakulanxayaysiinta ciyaarta fiidiyowga
Waxaan aasaasay AudioMob maxaa yeelay waxaan fahansanahay jahwareerka ay ciyaartooyadu dareemayaan marka ciyaartooda ay hakiso xayeysiinta faragalinta ah. Isku soo wada duub qaar ka mid ah maskaxda ugu fiican ee warshadaha, xalka AudioMob wuxuu siinayaa hab loogu talagalay horumariyeyaasha moobiilka si ay lacag uga helaan ciyaartooda iyagoo u maraya xayeysiis maqal ah iyagoo ilaalinaya ciyaartoydooda.
Sida loo Sameeyo Hantidhawrka SEO oo dhammaystiran